Iindaba - Zeziphi iintlobo zamalaphu ezisetyenziselwa ukwenza ifanitshala?
Zeziphi iintlobo zamalaphu ezisetyenziselwa ifanitshala?
Ngokwamalaphu ahlukeneyo, ifanitshala eyonyuselweyo inokwahlulahlulwa ibe sisikhumba, isikhumba esingeyonyani, ilaphu, njl. Ilaphu elenziwe ngefenitshala eyonyuselweyo sisikhumba sezilwanyana, ilaphu elenziwe ngefenitshala eyonyuselweyo sisikhumba esenziwe ngumntu, kunye nelaphu lesofa yilaphu ihempe, umqhaphu, ifayibha yemichiza kunye nezinye iimpahla. Ngokwezixhobo ezahlukeneyo zamathambo zefanitshala ethambileyo, inokwahlulwa-hlulwa ibe ngamathambo emithi, amathambo esinyithi kunye nefenitshala ethambileyo ngaphandle kwamathambo. Isakhelo somthi ifanitshala ethambileyo yifenitshala ethambileyo enezinto ezenziwe ngomthi njengamathambo ayo. Ifenitshala yesinyithi ifanitshala ethambileyo yifenitshala ethambileyo eyenziwe ngezinto zetsimbi okanye isinyithi kunye nomthi njengamathambo, kwaye akukho fenitshala yesoftware yamathambo, oko kukuthi, akukho skeleton ngaphakathi, kunye nefenitshala yegwebu eyenziwe amagwebu ngokuthe ngqo ngezinto zegwebu, kubandakanya iflatable kunye nefenitshala egcwele amanzi.
1. Isofa yomqhaphu: indawo efanelekileyo kwaye intle
Isofa yelaphu eyenziwe ngomqhaphu ococekileyo ithambile, iyaphefumla, inendalo kwaye inobuhlobo kwindalo. Isondele kakhulu kulusu. Luhlobo oludumileyo kwintengiso. Isitayile se-Idyllic sisetyenziswa kakhulu kwisofa ecocekileyo yomqhaphu.
2. Isofa yeFlannelette: ithambile kwaye ibuthathaka
Njengoboya besilwanyana esincinci, eyona nto inomtsalane ngesofa yesofaji kukuchukumisa kwayo okuhle kunye nokuthantamisa. Ukusuka kwi-corduroy kwixa elidlulileyo ukuya kwi-suede ngoku, isofa ye-flannelette iyatshintsha ubume bayo kwi-gaudy kunye nenhle. Xa kuthelekiswa namanye amalaphu, isofa yeflannelette ibiza kakhulu.
3. Isofa yelinen: kushushu ebusika kwaye kupholile ehlotyeni
Kushushu ebusika kwaye kupholile ehlotyeni, elona candelo linomtsalane kwisofa yelinen kukuqhuba kakuhle kwe-thermal. Nokuba kushushu ehlotyeni, ungakhathazeki ngokubila. Umgangatho wesofa yelinen usondele kwaye uthambile, ukumodareyitha kubulukhuni kunye nokuthamba, kunye nohlobo lobushushu obulula kunye nendalo.
4. Isofa edibeneyo: iyafana nendalo
Umqhaphu odityaniswe nezinto zeekhemikhali zefayibha unokubonisa isiphumo sesilika, i-flannelette okanye i-hemp, kodwa ipateni kunye nombala ayizizo ezendalo nezinyulu, kwaye ixabiso lincinci.